राष्ट्रिय सभागृहमा विप्लवले के भने ? सम्बोधनको पूरा भिडियो — onlinedabali.com
काठमाडाैं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव विप्लवले करिब तीन वर्षपछि पहिलो पटक सार्वजनिक सम्बोधन गरेका छन् । सरकार र नेकपाबीच भएको सहमतिमा हस्ताक्षर कार्यक्रममा विप्लवले कुनै पनि शक्तिले हेप्न खोजे या हमला गर्न खोजे सहेर नबस्ने बताएका छन् ।
नेपालमा अहिले झुपडी, गाउँ, शहर या देशबाहिर रहेका नेपालीहरु कसैले पनि सुरक्षित महसुस गर्ने स्थिति नभएको बताए । ”हामी अगाडि बढेकै हो । हाम्रो अहिले पनि भनाइ छ– नेपालमा कसैले पनि सुरक्षित महसुस गर्ने स्थिति छैन । सबै नेताहरुलाई, सबै पार्टीहरुलाई, सबै जनतालाई आफ्नो जीवनमाथि आफैं हाबी भएको, आफै नेतृत्व गरिरहेको जस्तो अनुभूति भइरहेको छैन । अहिलेकै भन्नुहोस् या जहिल्यैको पनि । हरेक घटनाक्रममा ठूलो तरंग नेपाली जनताको बीचमा छ । अहिले पनि छ । सायद, तपाईंहरु सबैले बुझिसक्नुभएको छ ।”
तीन बुँदे सहमितभित्र सुन्दर सपना रहेको दाबी गर्दै विप्लवले सार्वभौमिक सत्ता सम्पन्न जनतालाई एकचोटी नयाँ फैसला गर्ने वातावरण बनाउन जरुरी रहेकोमा बताए ।
विप्लवले अगाडि भने- हामीले भनेका छौं– जनमत । छलफल हुने पनि गरेको छ, जनमत । सार्वभौमिक सत्ता सम्पन्न नेपाली जनता । जनतालाई एकचोटी नयाँ फैसला गर्ने वातावरण बनाउन जरुरी छ । के चाहन्छन् जनताले ? के यो दलाल पूँजीपतिहरुको चक्रमा सधैं घुम्नुपर्ने नियति हो ? के नेपाली जनताले स्वतन्त्रपूर्वक ‘स्टेप’ चाल्न नपाउने ? नेपाली राज्यले, सरकारले चाल्न खोज्दा पनि नपाउने परिस्थिति त बन्यो नि त ! यो छर्लङ्गै देखेका छौं नि ।